Othisha bafunde ngokunakekela isikhumba | News24
Othisha bafunde ngokunakekela isikhumba
PHOTO: suppliedIsekela lika Thishanhloko uMnuz Moses Shishaba emukela uxhasho lwe-first aid kit oluvela kwabakwa-Vaseline®.
INKAMPANI eyaziwa eNingizimu Afrika yonke i-Vaseline® ivakashele imitholampilo nezikole ezingu-100 emiphakathini eyehlukene, ifundisa abazali, othisha nabasebenzi ngokunakekela isikhumba.
UDumo Primary School eClermont ibe ngezinye zezikole ezivakashelwe yile nkampani lapho kufundiswe khona othisha ngokunakekela isikhumba sabo baphinde baxhaswa nge-First Aid Kit phecelezi isikhwama esinezimfanelo ezidingekayo ngokuphuthuma uma umuntu elimele.
Lo mkhankaso uyingxenye ye-project ye-Vaseline®, lapho le nkampani izibophezele khona ukuthuthukisa ukunakekelwa kwesikhumba kubantu baseNingizimu Afrika.
ENingizimu Afrika kuyi mvelakancane ukuthola ukunakekelwa kwesikhumba okusezingeni eliphezulu, njengoba kuno dokotela wesikhumba oyedwa kubantu abangu-270 000.
Ngenyanga kaNcwaba (August), i-Vaseline® yahlangana nezitolo ezikhethiwe zakwa-Spar ukuze kutholwe imali yokufundiswa abantu ngokunakekelwa kwesikhumba emiphakathini eyehlukene.
Ngomkhiqizo we-Vaseline® ngamunye owawuthengwa ezitolo zakwa-Spar ezingu-200, u-R1 wawunikelwa kuyo le-project.
Lokhu kuye kwavumela i-Vaseline® ukuba iqeqeshe abasebenzi abangama-266 ngezifo zesikhumba nokunakekela isikhumba bese labo basebenzi badlulisele abakufundile emphakathini, ezikoleni nasemtholampilo.
Okhulumela inkampani yakwa-Unilever uSphelele Mjadu Uthe: “I-Vaseline® ikholelwa ukuthi imikhankaso efundisa abantu ngokunakekelwa kwesikhumba ingasiza ekuvikeleni izinkinga abantu ababhekana nazo ngezifo eziphathelene nesikhumba. Sesiside isikhathi lapho iVaseline® Blueseal isetshenziswa abantu yingakho sikholelwa ekutheni uma uyisebenzisa zinsuku zonke ingaholela ekutheni umuntu abe nesikhumba esihle futhi esinempilo.”
Abakwa-Vaseline® bafundise othisa base-Dumo Primary School ngokunakekelwa kwesikhumba bathi:
“Ngemva kokugeza kumele ugcobe umzimba wonke. Kumele ugeze ekuseni nase busuku. Ukugeza kususa amafutha esikhumbeni yingakho kubalulekile ukuthi ugcobe umzimba wakho njalo uma uqeda ukugeza.
Gcoba isikhumba uma sishiswe yilanga. Umoya, ukungcola noma insipho enamandla kakhulu kwenza umuntu abe nesikhumba esomile futhi sishoshozele.”
“Kubalulekile ukuba umuntu ageze emva kokuzi voca voca bese eya gcoba umzimba wonke ukuze isikhumba singomi.
Sebenzisa i-Vaseline® Blueseal ukuze unakekele isikhumba futhi usivikele ngemva kokuba uzwe sishoshozela noma ulimele kancane.”